နိုင်ငံ ပွဲအပြီးမှာ နိုင်ပွဲနဲ့ ပြန်လာခဲ့တဲ့ . . . မန်ချက် စတာ ယူနိုက်တက် သတင်းတိုများ - SPORTS MYANMAR
နိုင်ငံ ပွဲအပြီးမှာ နိုင်ပွဲနဲ့ ပြန်လာခဲ့တဲ့ . . . မန်ချက် စတာ ယူနိုက်တက် သတင်းတိုများ
မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင်း ဟာ ယမန်နေ့ ညက နယူး ကာဆယ် အသင်း ကို အဝေးကွင်း မှာ ၄ – ၁ နဲ့ အနိုင် ကစား ခဲ့ ပါတယ် ။ ဒါဟာ တော့တင်ဟမ် ဟော့စပါး အသင်း ကို ၆ – ၁ နဲ့ ရှုံးနိမ့် ခဲ့မှု ကို မဖာထေး နိုင်ခဲ့ ပေမယ့် အဆိုပါ ပွဲ တုန်းက ဆုံးရှုံး ခဲ့ရတဲ့ ၃ မှတ် ကိုတော့ ပြန်ပြီး ရယူ နိုင်ခဲ့ ပါတယ် ။ အထူး သဖြင့် ချဲလ်ဆီး ၊ လီဗာပူး ၊ အာဆင်နယ် တို့ အမှတ်လျော့ချိန်မှာ အမှတ်ပြည့် ယူနိုင်ခဲ့တာက အားရ ကျေနပ်စရာ ဖြစ်ခဲ့ ပါတယ် ။
ယူနိုက်တက် ဟာ လုခ်ရှော ရဲ့ O.G ကြောင့် နောက်က လိုက် ကစားခဲ့ ရပြီး ဟယ်ရီ မက်ဂွဲယား က ပထမပိုင်း မှာတင် ချေပဂိုး ပြန်သွင်း နိုင်ခဲ့ ပါတယ် ။ ဒုတိယပိုင်း မှာတော့ ဖာနန်ဒက်စ် ၊ ဘစ်ဆာကာ နဲ့ ရက်ဖိုဒ့် တု့ိက ၁ ဂိုးစီ သွင်းယူ ပေးခဲ့ ကြပါတယ် ။
ယူနိုက်တက် ဟာ နယူး ကာဆယ် ဂိုးပေါက် ကို ၂၈ ကြိမ် ကန်သွင်း ခဲ့ပြီး ဒီရာသီ ပရီးမီးယားလိဂ် မှာ အကြိမ် အများဆုံး ဖြစ်လာ ခဲ့ ပါတယ် ။
အာရွန် ဝမ် ဘစ်ဆာကာ ဟာ ယမန်နေ့ က ယူနိုက်တက် အတွက် ပွဲပေါင်း ၅၀ ပြည့်မြောက် သွားခဲ့ပြီး သူ့ အတွက် အမှတ်တရ ဖြစ်စေမယ့် ပထမဆုံး ပရီးမီးယားလိဂ် သွင်းဂိုး ကိုလည်း ရယူ နိုင်ခဲ့ ပါတယ် ။
ဘရူနို ဖာနန်ဒက်စ် ကတော့ ပွဲရဲ့ အကောင်းဆုံး ကစား သမားတွေ ထဲက တစ်ဦး ဖြစ်ခဲ့ပြီး ပင်နယ်တီ နဲ့ ချေပဂိုး တစ်ဂိုးတို့ မရခဲ့ ပေမယ့် ၂ – ၁ ဖြစ်စေမယ့် ဂိုးကို လှလှ ပပ သွင်းပေး ခဲ့သလို ရက်ဖိုဒ့်ရဲ့ ဂိုး ကိုလည်း ဖန်တီး ပေးသွားခဲ့ ပါတယ် ။
ယူနိုက်တက် ဝါရင့် ကွင်းလယ်လူ မာတာ ဟာလည်း ယမန်နေ့ ညက ပွဲမှာ ပွဲထွက် ကစားခဲ့ပြီး ပုံစံ ကောင်းပြသ ကာ အကောင်းဆုံး တစ်ဦး ဖြစ်ခဲ့ ပါတယ် ။ ယူနိုက်တက် ပရိသတ်တွေ ကတော့ နောက်ပွဲတွေ မှာလည်း မာတာ ကို ဆက်သုံးဖို့ တိုက်တွန်း ပြောဆို မှုတွေ ရှိလာခဲ့ ပါတယ် ။
မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အတွက် ချေပဂိုး ကို ခေါင်းတိုက် သွင်းပေး ခဲ့တဲ့ ဟယ်ရီ မက်ဂွဲယား ကလည်း “ဝေဖန်မှုတွေ ကို ချေဖျက် နိုင်ပြီလို့ ကျွန်တော်တို့ မပြောပါဘူး ၊ ဒါပေမယ့် ရာသီအစ မှာ ၃ ပွဲလောက်ပဲ ကစားရ သေးချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့ ကို ကမ္ဘာ ပျက် နေသလောက် ပြောဆို ခဲ့တာတွေ ရှိပါတယ် ။ အမှန် က ၂ ပွဲ နိုင် ၂ ပွဲရှုံးပါ ။ ရာသီကုန်ဖို့ အဝေးကြီး လိုပါသေးတယ် ။ အများကြီး တိုးတက် လာဦးမှာပါ” လို့ ပြောဆို သွားခဲ့ ပါတယ် ။
ယူနိုက်တက် နည်းပြ ဆိုးရှား ကတော့ လူငယ် တိုက်စစ်မှူးလေး မေဆင် ဂရင်းဝုဒ် ဟာ ဒီပွဲ ကို ကစားဖို့ အတွက် ကြံ့ခိုင်မှု မပြည့်၀ တာကြောင့် အနားပေးဖို့ ချန်လှပ် ထားခဲံတာ ဖြစ်တယ် လို့ ပွဲ မကစားခင် မှာ သတင်းထောက်တွေ ကို ဖြေကြား သွားခဲ့ ပါတယ် ။
ယမန်နေ့ ညက ကစား သွားခဲ့တဲ့ မန်ချက် စတာ ယူနိုက်တက် အသင်းသားတို့ရဲ့ Rating များ –
ဘစ်ဆာကာ ၆ ၊ လင်ဒီလော့ဖ် ၄ ၊ မက်ဂွဲယား ၈ ၊ ရှော ၅
တော်မီနေး ၆ ၊ ဖရက်ဒ် ၅ ၊ ဖာနန်ဒက်စ်7၊ မာတာ ၈ ၊ ဂျိမ်းစ် ၆
လူစားဝင် ကစား သမားများ – ပေါ့ဘာ ၆ ၊ ဗန်ဒီဘိ ၈ တိ့ု ဖြစ်ကြပါတယ် ။
မန်ချက် စတာ ယူနိုက်တက် ဟာ လာမယ့် ကြားရက် မှာ ချန်ပီယံလိဂ် အုပ်စု အဖွင့် ပွဲစဉ် အဖြစ် ပြင်သစ် ထိပ်သီး PSG နဲ့ ရင်ဆိုင် ကစား ရမှာ ဖြစ်ပြီး လာမယ့် ပိတ်ရက် မှာတော့ ချဲလ်ဆီး နဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ် ပွဲစဉ် ကို ကစား ရမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။
ယူနိုက်တက် ကို ရောက်လာတဲ့ တိုက်စစ်မှူးသစ် ကာဗာနီ ဟာ PSG နဲ့ ပွဲ မှာ ပါဝင် လာနိုင်ဖို့ ရှိနေပြီး ပရီးမီးယားလိဂ် မှာ အနီကတ် ထိ ထားတဲ့ မာရှယ် လည်း ပြင်သစ် ကလပ် နဲ့ ပွဲမှာ ပြန်လည် မြင်တွေ့ ရဖွယ် ရှိ နေပါတယ် ။